IzeMpilo: i-porn isishukumiso esikhulu kakhulu Umvuzo weZiseko
Ikhaya impilo I-Stimulus engavamile
Eli candelo lisekelwe kwiingcatshulwa kwincwadi kaGary Wilson Ubuchopho bakho kwi-Porn, i-Intanethi ye-Intanethi kunye neSayensi eVukayo yokuLungisa kunye neMvume yoMlobi.
Yintoni evuselela kakhulu?
Amagama abonisa inkanuko, imifanekiso kunye neevidiyo kudala zijikeleza -nanjengoko kukhawulezisa i-neurochemical kumaqabane enoveli. Ke yintoni eyenza ukuba iphonografi yanamhlanje inyanzelise ngokukodwa? Ayisiyonto intsha engapheliyo. I-Dopamine iyavutha ngenxa yezinye iimvakalelo kunye nezinto ezikhuthazayo nazo, zonke zihlala zibalasele kwi-intanethi:
• Ukumangaliswa, ukothuka (Yintoni engothusiyo kwi-porn zanamhlanje?)
Ukuxhalaba (ukusebenzisa iphonografi engahambelaniyo nexabiso lakho okanye isini sakho)
• Ukufuna nokuphanda (Ukufuna, ukulindela)
Ngapha koko, i-intanethi ye-intanethi ijongeka kakhulu njengezinto oososayensi abazibiza ngokuba sisikhuthazo esingaqhelekanga. Kwiminyaka eyadlulayo, owaphumelela imbasa kaNobel uNikolaas Tinbergen wafumanisa ukuba iintaka, amabhabhathane kunye nezinye izilwanyana zinokuqhathwa zikhethe amaqanda namaqabane angengawo. Iintaka ezingamakhosikazi, umzekelo, zazisokola ukuhlala kwi-Tinbergen enkulu kune-yobomi, enamaqanda abonwe ngokucacileyo ngelixa amaqanda abo amdaka, afipheleyo abhubha angahoywanga. Ooqongqothwane abangamadoda baya kuwahoya amaqabane okwenyani bekhetha iinzame ezililize zokuziqhelanisa neebhotile zebhiya ezimdaka. Kuqongqothwane, ibhotile yebhiya elele emhlabeni ikhangeleka njengeyona inkulu, intle, eyona isetyhini eyakha yabonwa.
Ngamanye amagama, endaweni yempendulo yemvelo yokumisa 'kwindawo emnandi' apho ingarhwebeseli isilwanyana ngaphandle komdlalo wokukhwelana, le nkqubo ingena ngaphakathi iyaqhubeka ibangela iimpendulo zentshisakalo kwizinto ezingekho ngqiqweni, zokwenziwa.
UTinbergen ubize ezo nkohliso ngokuthi 'zizinto ezingaphaya kwamandla omntu,' nangona ngoku zihlala zibizwa nje ngokuba 'zizinto ezingaqhelekanga'.
Isikhuthazi esingaqhelekanga ziinguqulelo ezibaxiweyo zezinto eziqhelekileyo esizibona zixabisekileyo njengezibalulekileyo. Into enomdla kukuba, nangona kungenakwenzeka ukuba inkawu inokukhetha imifanekiso kunabafazi bokwenyani, iinkawu ziya 'kuhlawula' (imbuyekezo yejusi yejogo) ukujonga imifanekiso yeebhokhwe zenkawu zabasetyhini. Mhlawumbi ayimangalisi into yokuba iphonografi yanamhlanje inokuphanga imeko yethu.
I-intanethi ye-intanethi ikhuthaza njani?
Xa sisenza into ebaluleke kakhulu yokuvuselela eyona nto iphambili kuthi ngenxa yokuba ibangele ukuqhuma okukhulu kwe-dopamine kwisekethe yomvuzo wobuchopho kunogxa wayo wendalo. Kubasebenzisi abaninzi, iimagazini zoononophala zangexesha elidlulileyo azikwazanga ukukhuphisana namaqabane okwenyani. Indawo yokudlala ka-Playboy khange iphindaphinde eminye imikhondo ababenayo ngaphambili abasebenzisi bezononografi ukuba bafunde ukunxulumana nabo banokubakho ngokwenyani okanye amaqabane okwenyani: ukunxibelelana ngamehlo, ukubamba, ukuvumba, uyolo lokudlala ngothando kunye nokudanisa, ukubonwa kwangaphambili, isondo njalo njalo.
I-intanethi ye-intanethi yanamhlanje, nangona kunjalo, ihambelana nokukhuthaza okungaphezulu. Okokuqala, inika ii-hotties ezingapheliyo ezikhoyo ezinqakraza. Uphando luqinisekisa ukuba ulindelo lomvuzo kunye nenoveli yonyusa enye kwenye ukonyusa uchulumanco kunye nokubuyisela kwakhona ukujikeleza komvuzo kwengqondo.
Okwesibini, i-intanethi ye-intanethi inikezela amabele amaninzi amaninzi kwaye i-Viagra igxininisa i-pengisean penises, i-grunts of grunts, i-pile-driving drives, i-double-triple-penetration, i-gang-bangs kunye nezinye izinto ezingenangqiqo.
Okwesithathu, uninzi lwabantu, imifanekiso emileyo ayinakuthelekiswa nenkcazo yanamhlanje ye-hi-definition yemizuzu emi-3 yevidiyo yabantu ababandakanyeka kwisini esomeleleyo. Ngama-bunnies ahamba ze yonke into onayo yayiyingcinga yakho. Ubusoloko usazi ukuba kuzakwenzeka ntoni ngokulandelayo, nto leyo ibingabalulekanga kangako kwimeko ye-intanethi eneminyaka eli-13 ubudala. Ngokwahlukileyo, ngomjelo ongapheliyo 'andiyikholelwa le nto ndiyibonileyo' iividiyo, ulindelo lwakho luhlala luphulwa (apho ingqondo ikufumanisa kukhuthaza ngakumbi). Gcina ukhumbula kwakhona, ukuba abantu bavela ukuze bafunde ngokubukela abanye besenza izinto, ke iividiyo zinamandla ngakumbi 'ngendlela yokufunda' kunezi-stills.
Ngobunkunkqele be-science-fiction obuya kwenza u-Tinbergen athi, 'Ndikuxelele', abasebenzisi be-porn banamhlanje bahlala befumana i-intanethi ye-intanethi ekhuthaza ngakumbi kunamaqabane okwenyani. Abasebenzisi banokungafuni ukuchitha iiyure bezingelwe phambi kwekhompyuter ejonge iphonografi kwaye ngokunyanzelwa becofa imifanekiso emitsha. Banokukhetha ukuchitha ixesha kunye nabahlobo kunye nokudibana namaqabane anokubakho kwinkqubo.
Ukanti inyani iyasokola ukukhuphisana kwinqanaba lokuphendula kwengqondo, ngakumbi xa umntu ephosa ibhalansi ukungaqiniseki kunye nokubuyela umva kokunxibelelana kwezentlalo. Njengoko icawa kaNowa ikubeka kwimemori yakhe I-Wack: Inomdla kwi-Internet ye-Porn, 'ayikuko ukuba ndandingafuni isini sokwenyani, kungenxa nje yokuba kwakunzima kakhulu kwaye kudidekile ukulandela kunamanyala.' Kwaye oku kufumana i-echo kwii-akhawunti ezininzi zomntu wokuqala:
"Ndadlula ixesha lokuba ndingatshatanga, ndinyaniswe edolophini encinane apho kwakukho amathuba amathandana ambalwa, kwaye ndaqalisa ukuhlambalaza ngokuphandle. Ndandimangaliswe ngokukhawuleza ukuba ndandifumana njani. Ndaqalisa ukulahlekelwa yimini yomsebenzi wokungena kwiisayithi zoononophala. Kwaye andiyiqondi ngokupheleleyo into eyenzekayo kum ukuba ndilele embhedeni kunye nomfazi kwaye ndazibhokoxa ndizama ukukhumbula umfanekiso owonwabileyo ukuze ndibe nzima. Andizange ndicinge ukuba kwenzeka ntoni kum. Ngethamsanqa, ndibe nesiseko esinexesha elide lokulala ngokwesondo ngaphambi kokuba ndibone i-porno kwaye ndaqonda ukuba kwenzekani. Emva kokuba ndiyeke, ndaqala ukubeka kwakhona, kwaye kaninzi. Kwaye emva koko ndadibana nomfazi wam. "
Indlela iShishini leZibonda elixhaphazelayo lixhaphaza i-Stimuli engavamile
Kule mihla, akukho kuphela isiphelo sokuvuselela okungaphaya kwamandla. Umzi mveliso we-porn sele unikezela nge-3-D ye-porn kunye neerobhothi kunye neethoyi zesini ezihambelana ne-porn okanye abanye abasebenzisi bekhompyuter ukulinganisa isenzo somzimba. Kodwa ingozi ilele xa kukho into:
• iirejistri njengento 'eyigugu' ngokukhethekileyo, oko kukuthi, inguqu enkulu yento eyenziwa yiokhokho bethu (kunye nathi) ukufumana ukungenakunyaniseki (ukutya okuphezulu kwekhalori, ukuvusa isondo),
• ifumaneka ngokufanelekileyo ngokunikezela okungenamkhawulo (kungabonakali kwindalo),
• kuza kwiintlobo ezininzi (ubuninzi obuthile),
• kwaye sihlala sinqabile.
Ukutya okungahlambulukanga, okuninzi okutya okungafunekiyo kufanelana nale modeli kwaye kubonwa ngokubanzi njengento ephakamileyo. Unokwenza i-32-ounce isiphuzo esiphuzileyo kunye nekhwama yeebhotile ezinobisi ngaphandle kokucingwa, kodwa zama nje ukutshatyalalisa i-caloric efana neyinyama eyomileyo kunye neengcambu ezibilisiwe!
Ngokufanayo, ababukeli bahlala bechitha iiyure bejonga iifriji zevidiyo ezingamanyala bekhangela ividiyo elungileyo ukuba bayigqibe, ukugcina i-dopamine iphakanyisiwe ixesha elide ngokungaqhelekanga. Kodwa zama ukucinga ukuba umzingeli-oqokelelayo uhlala echitha inani elifanayo leeyure zokugcoba i-stick-figure kwi-wall wall. Khange yenzeke.
Iphonografi ibeka umngcipheko owahlukileyo ngaphaya kokuvuselela okungaphaya kwamandla. Okokuqala, kulula ukufikelela kuyo, ekhoyo nge-24/7, yasimahla kunye neyabucala. Okwesibini, uninzi lwabasebenzisi luqala ukubukela iphonografi ngokufikisa, xa iingqondo zabo zikwincopho yeplastiki kwaye abasesichengeni sokulutha kunye nokubuyela umva. Okokugqibela, kukho umda ekusetyenzisweni kokutya: isisu somthamo kunye nokuchasana kwendalo okukhaba xa singekhe sikwazi ukujongana nenye into.
Ngokwahlukileyo, akukho mingcele yomzimba kwi-intanethi yokusetyenziswa kwezilwanyana, ngaphandle kwesidingo sokulala kunye nekhefu lokuhlamba. Umsebenzisi unganqumla (ukuhlambalaza ngaphandle kokugqithisela) kwi-porn ngeeyure ngaphandle kokubangela iimvakalelo zokuxhatshazwa, okanye ukuphazamiseka.
Ukuzinkcinkca kwi-porn kuvakala njengesithembiso sokonwaba, kodwa khumbula ukuba umyalezo we-dopamine 'awoneliseki'. Ngu, 'qhubeka, ulwaneliseko lusondele kwikona':
"Ndiya kuzibangela ukuba ndize ndize ndiyeke, qhubeke nibukela iipopayi, kwaye nihlale kumazinga aphakathi, nisoloko nilungisa. Ndandikhathazeke ngakumbi ngokubukela i-pornography kunokuba ndiye kwi-orgasm. I-Porn ibendigxininise ekugqibeleni ndade ndiphelelwe yinto kwaye ndandidla ngokuzinikela.
<< Uxinzelelo Iziyobisi >>